Ihe niile ịchọrọ ịma banyere oyi oyi na Spain | Netwọk Mgbasa Ozi
N'ezie, ị nụrụ okwu nke oyi dobe mgbe oge ndị a bịara. Ma ọ bụ ihe ọmụmụ gbasara ihu igwe nke na-apụtakarị kwa afọ. Ihe mere eji ekwukarị ihe a bụ maka na ọ na-emetụta oke mmiri ozuzo, ọ na-abụkarị ime ihe ike, nke na-ebute nnukwu ikuku na oke ifufe.
Youchọrọ ịma ihe ọrịa oyi na-atụ na ihe bụ ntọala ya? Nọgidenụ na-agụ n'ihi na a post anyị na-agwa gị ihe niile.
1 Oke ihe ojoo ihu igwe
2 Etu esi etolite oyi oyi
5 Ọnọdụ oyi na mpaghara ụfọdụ
Oke ihe ojoo ihu igwe
Edebanyela oyi oyi na-ede aha ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa afọ n'oge a. Ọ na-adọta ọtụtụ nlebara anya nyere na ime ihe ike ya dị oke. N'ime ndekọ, e meriela naanị otu awa n'ime ndekọ nke oke mmiri ozuzo. Ihe ndị a bụ n'ezie oge dị oke egwu nke nwere ike ibute ọtụtụ mbibi na mbibi n'obodo. N'ihi ya, ọtụtụ obodo enweghị ọkụ eletrik na akụrụngwa na-ekwenye.
Ọdịdị oyi a bụ nke njirimara anyị Ihu igwe Mediterranean nke edebanyere aha ha na ya mmiri ozuzo ọ bụghị nke ukwuu ma lekwasị anya n'oge oyi. Na mkpokọta, imirikiti mmiri ozuzo na-emetụta ma na-eso ọtụtụ mmebi.
Mgbe ị na-edekọ mmiri ozuzo Ọ pụtaghị na mmiri ozuzo ndị a na-eme ihe ike na-eme ka oke mmiri ozuzo na-eto eto kwa afọKama nke ahụ, ha na-etinye uche ha n'ime obere oge. Ọ bụghị ebe niile na Spain nwere oke mmiri ozuzo, mana kama ha lebara anya na obere oghere. O nwere ike ịbụ n’otu obodo ka a na-ahapụ ọtụtụ mmiri ozuzo, ebe anyị na-enwe obere mmiri ozuzo n’obodo dị nso.
Dị ka anyị kwurula na mbụ, Ọ bụghị oge mbụ ị na-arịa mmiri oyi na-agụ agụụ, ma ha na-eme mgbe oge ọkọchị gachara n'ihi mmekọrịta nke oke ikuku. Ihe onyonyo nke oge ndia gabigara anyi bu ihe ngosi di egwu ma gha ebibi oke onodu aku na uba.
Etu esi etolite oyi oyi
Ma anyị na-ekwu okwu oge niile banyere oke mmiri ozuzo a na nsonaazụ ndị ọ nwere na anyị anaghị ekwu maka otu esi guzobe ya. Gịnị na-akpata ọnọdụ dị otú ahụ? Dabere na Statelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ihu Igwe na State, AEMET, na-egosi mbido ihe a na oké ịda mba na ịdị elu nke nrụgide ebe n'akụkụ etiti bụ ikuku kachasị oyi.
Ọ bụ oke ikuku dị elu (ihe dị ka mita 5.000) nke na-agbada nrụgide ya nke ukwuu gbasara ikuku gburugburu ya. Obi ịda mbà a dị elu nwere etiti ikuku oyi ma na -emepụta igwe ojii nke na-egosipụta ọkwa mmiri ozuzo. Mgbe a na-ekwu maka ụdị ihe ịtụnanya a, a na-akọwa oke ikuku ndị na-abịa site na puku kwuru puku kilomita ndị ha nwere ike ịga njem.
Ọgba aghara a na nnuku nrụgide anaghị enwe mmetụta ọ bụla ma ọ bụ ngosipụta n'elu ụwa. Nke ahụ bụ, anyị anaghị ahụ ya na ọkwa nke aka anyị. Otú ọ dị, a na-eme nha nnwale nke egosiri na ọdịda oyi na-atụgharịkarị uche na ọkwa dị ala. Ihe ngosi kachasị na-abụkarị ifufe, mmiri ozuzo, mgbanwe mberede na ọnọdụ okpomọkụ ma ọ bụ ọbụna nrụgide. Site na nke a, enwere ike ịchọpụta ọdịda oyi n'oge iji gbochie nsonaazụ ya.
Ndị mmadụ na-agbakọkarị ntụ oyi na mmiri ozuzo ndị ikuku oyi na-eso. Ọ bụ eziokwu na ụdị mmiri a na-abụkarị nsonazụ mmiri oyi. Otú ọ dị, ha abụghị otu. Oge oyi bụ oge na-apụta n'ihi njirimara nke ihu igwe Mediterenian na ịda mbà n'obi dị elu n'ihi oke ikuku dị iche iche.
Akụkụ bụ isi nke ọdịda oyi bụ nke inwe nnukwu ọdịda na-adaba na nkeji ole na ole na ebe a kapịrị ọnụ. Mgbe mmiri ozuzo zoro n'ụzọ dị ike n'oge dị mkpirikpi, ọ bụrụ na ebe ọ dara bụ n'obodo ma ọ bụ obodo, n'ozuzu, akụrụngwa adịghị njikere ịnagide ma nyefee mmiri dị ukwuu. N'ihi ya, ihe ọ na-akpata bụ ọdachi, na-ebibi ihe onwunwe dị egwu na ọbụna na-anwụ ndụ.
Were ya na ị nọ n'ụgbọala nakwa na idei mmiri ahụ na-akụda ma na-adọkpụpụta gị n'ike dị egwu. Ọ gaghị ekwe omume ịgbanahụ ọnọdụ a na-enweghị enyemaka mpụga. Oke mmiri ozuzo a na oke mmiri ozuzo abụghị oke oyi n'onwe ya, kama ọ bụ ihe ịtụnanya metụtara ya.
Dabere na AEMET, a na-eji mmiri oyi atụtụ aka na ntụpọ nke oke mmiri ozuzo, mbibi na mbibi nke na-eduga n'ọnọdụ ọnọdụ ihu igwe dị oke egwu. Ihe bụ nsogbu bụ na echiche a ezighi ezi. Maka nke a, AEMET na-akwụsị iji aha a, nke na-ebute ọgbaghara. Oge oyi dị ka echiche na-achịkọta ọtụtụ ihe na-ezighi ezi.
O bu kaadi ohia nke eji ekwu okwu banyere ihe ojoo n’uzo. Kama iji okwu a, nke kacha dị oke mma ga-abụ oke ifufe na mmiri ozuzo na-aga n'ihu, ebe ha nwere ike ịda na-enweghị oyi oyi. Oge oyi na-atụ bụ naanị banyere ịda mba dị elu. Agbanyeghị, enwere ike ịnwe oke ebili mmiri na ebibi ihe na ọ nwere ike ọ gaghị abụ ndagide dị elu.
N'ihi ọgba aghara ndị a, ọ bụghị naanị na ọnụ ọgụgụ mmadụ kamakwa n'etiti ndị na-amụ gbasara ihu igwe, a na-akwụsị. Naanị na Spain na Germany ka a ka eji echiche a eme ihe, mana pere mpe.
Site na ihe omimi nke ihu igwe nke oke mmiri ozuzo, obodo na obodo ndị metụtara emetụta mmiri, site n'okporo ụzọ, ụgbọ ala ruo ụlọ na okpuru ulo. Ọtụtụ obodo ha enweghị ọkụ eletrik na mmiri. E si n’osimiri ahụ too ma too n’ọdachi.
Ọnọdụ oyi na mpaghara ụfọdụ
Oge oyi anaghị emetụta ebe niile na Spain. Anyị ga-ekwu maka ụfọdụ mpaghara ebe ọ kacha emetụta.
Oyi dara na Valencia O nweela ọtụtụ idei mmiri, ọkụ eletrik na osimiri tojupụtara. Ọ hapụrụ ụmụ akwụkwọ karịrị 40 enweghị ụlọ akwụkwọ.
Oge oyi na Castellón ọ hapụrụ ndekọ mmiri ozuzo na mmiri 159 lita n'otu awa kwa mita mita. Ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ ga-eme ihe iji zọpụta ndụ na mmiri kpochapụrụ ihe ndị na-ekpofu ahịhịa.
Oge oyi na-atụ na Alicante ọ na-ebute oke mbibi n'ógbè a. Agbanyeghị, n'okwu a, ọ nwetala ọzụzụ karịa na Gibraltar. Dị ka e kwuru na isiokwu DANA, nke kachasị bụ na e guzobere ya na ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ.
Oyi dara na Barcelona ọnwa gara aga ọ metụtara site na igbu oge usoro ụgbọ oloko. Nke a na - ebute nnukwu nsogbu na ọrụ nke ọtụtụ puku mmadụ na mgbakwunye na akụrụngwa mebiri emebi. Ruo 235 lita kwa square mita kwa awa dara.
Dịka ị pụrụ ịhụ, udu mmiri oyi nwere ike ịkpalite oke mmiri ozuzo nke na-ebute oke mbibi, na-eweta mmefu akụ na ụba na ụjọ na ndị mmadụ. Enwere m olileanya na obodo nwere ike ịkwadebe maka ụdị ọnọdụ ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ntụ oyi
Etu esi kee ụwa